သင်၏ဆေးဆိုင်အတွက်ဒီဂျစ်တယ်ဆိုင်းဘုတ်ကိုဘယ်လိုသုံးရမလဲ။ - လွယ်ကူစွာခင်းကျင်းပြသခြင်း
မှတ်ချက်များကိုအဘယ်သူမျှမ sur သင့်ဆေးဆိုင်အတွက်ဒီဂျစ်တယ်ဆိုင်းဘုတ်ကိုဘယ်လိုသုံးရမလဲ။Posted in, ဒစ်ဂျစ်တယ်ဆိုင်းဘုတ် Par Clemပုံနှိပ်ထုတ်ဝေ ၂၀၂၀ မေလ ၂၇ ရက် ၂၀၂၀ မေလ ၂၇ ရက် .tiqueté ပျဉ်ပြား, ဒစ်ဂျစ်တယ်ဆိုင်းဘုတ်, ဆေးဆိုင်, ဆေးဆိုင်များ, ဆေးတိုက်, ဖန်သားပြင်, ဆိုင်းဘုတ်, ဆော့ဖျဝဲ, ပြတင်းပေါက်
ကျွန်ုပ်တို့၏အသက်တာတွင်နည်းပညာသည် ပို၍ အရေးကြီးလာသည်။ ပထမ ဦး စွာ၎င်းသည်လူတိုင်းအတွက်စျေးနှုန်းချိုသာပြီးသုံးစွဲနိုင်သည်။ ဒုတိယအချက်အနေဖြင့်နည်းပညာသည်အချိန်များစွာသက်သာစေသည်၊ စာရွက်စာတမ်းမရှိတော့၊ ကြော်ငြာပိုစတာလည်းမရှိတော့၊ ဒစ်ဂျစ်တယ်ဖြစ်သည်။
တဖြည်းဖြည်းနှင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများသည်ဤနည်းပညာအသစ်များဖြင့်သွေးဆောင်မှုခံနေရသောကြောင့်ဆေးရွက်ကြီးသမားများ၊ စူပါမားကက်များ၊ ကားအရောင်းကိုယ်စားလှယ်များသို့မဟုတ်မူးယစ်ဆေးဆိုင်များသည်သတင်းအချက်အလက်များကိုထုတ်လွှင့်ရန်ဖန်သားပြင်များကိုအသုံးပြုခြင်းကိုတွေ့ရခဲသည်။ ဒါပေမယ့်ဘာကြောင့်လဲ? ဖောက်သည်အတွေ့အကြုံတိုးတက်စေရန်ရိုးရှင်းစွာအ။
သို့သော်လှုံ့ဆော်မှုမရှိခြင်းကြောင့်အသုံးပြုရန်ရှာဖွေရန်ခက်ခဲနိုင်သည် ဒစ်ဂျစ်တယ်ဆိုင်းဘုတ် သို့သျောလညျးဤနည်းပညာ၏ဖြစ်နိုင်ခြေ (သင်မှန်ကန်သော software ကိုအသုံးပြုလျှင်!) နီးပါးအဆုံးမဲ့ဖြစ်ကြသည်။ ဒီဆောင်းပါးမှာ၊ မင်းတို့ရဲ့ဒီဂျစ်တယ်ဆိုင်းဘုတ်ကိုပေါင်းစပ်ဖို့အကြံဥာဏ်တချို့ပေးတယ် ဆေးဆိုင်!
သင်သည်သင်၏အနာဂတ်ဖောက်သည်များ၏မျက်လုံးများကိုဆွဲဆောင်လိုသလား။ သူ့မျက်လုံးများကိုဆွဲဆောင်ရန်သင်၏ပြတင်းပေါက်တွင်ဖန်သားပြင်တစ်ခုထားခြင်းထက်အဘယ်အရာပိုကောင်းနိုင်မည်နည်း။ သူသည်သင်၏ဆိုင်ပြတင်းပေါက်ရှေ့တွင်မိနစ်အနည်းငယ်ခန့်ရပ်ပြီးသင့်မျက်နှာပြင်ကိုကြည့်လိမ့်မည်။ ဒါပေမယ့်ဒီဖန်သားပြင်မှာဘာပြရမလဲ။ သင်၏မြို့တော်၏ရာသီဥတုကိုပြသနိုင်ပြီးနေ့နှင့်သီတင်းပတ်၏ရာသီဥတုနှင့် ပတ်သက်၍ သင်၏အလားအလာကိုအသိပေးနိုင်သည်။
ဖောက်သည်များ၏သိလိုစိတ်ကိုနှိုးဆွရန်သင်၏ဆေးဆိုင်၏လက်ရှိမြှင့်တင်မှုများကိုပြသခြင်းဖြင့်သင်၏ထုတ်ကုန်များကိုမီးမောင်းထိုးပြပါ။ အတွင်းထဲ၌ ၀ င်းဒိုးသည်သူမြင်တွေ့ရသောအရောင်းမြှင့်တင်မှုအကြောင်းသင့်အားပြောပြလိမ့်မည်။
သင်၏တိုင်းပြည်ရှိသတင်းများနှင့်သင့်ဖောက်သည်များအားနောက်ဆုံးပေါ်သတင်းများရရှိစေရန်တီဗီသတင်းချန်နယ်တစ်ခုကိုလည်းပြသနိုင်သည်။ လွယ်ကူစွာခင်းကျင်းပြသဥပမာအားဖြင့်၊ သင်သည် YouTube ဗီဒီယိုများသို့မဟုတ်တီဗီလိုင်းများကိုတိုက်ရိုက်ပြသရန်ခွင့်ပြုသည်။
သင်၏ဖောက်သည်သည်သင်၏ဆေးဆိုင်အတွင်း၌ရှိသည်။ သင်၌ဖောက်သည်များစွာရှိသောကြောင့်သင်အမှန်တကယ်အလုပ်များနေပြီးသင်၏ဖောက်သည်ကိုသင်မကူညီနိုင်ပါ။ သင်၏ဆေးဝါးရောင်းဝယ်မှုအလယ်ဗဟိုရှိသင်၏ထုတ်ကုန်များအကြောင်းသတင်းအချက်အလက်အချို့ကိုသင်၏ဖန်သားပြင်တစ်ခုပေါ်တွင်ပြသပါလေ။ ထိုကဲ့သို့သောဗီတာမင်အပိုင်းသို့မဟုတ်အခြားပစ္စည်းများအဖြစ်?
သင့်ဖောက်သည်များ၏အတွေ့အကြုံတိုးတက်စေရန်အပြင်၊ သင်သည်အချိန်များစွာသက်သာပြီးအခြားလုပ်ငန်းများကိုအာရုံစိုက်နိုင်လိမ့်မည်။ သင်၏ပရိုမိုးရှင်းသည်သင်၏ဖန်သားပြင်များထဲမှတစ်ခုမြင်ပြီးသည်နှင့်ဝယ်သူသည်သူထံသို့တိုက်ရိုက်လာလိမ့်မည်။
ခိုးယူမှုသည်ဆေးဝါးပညာရှင်များအတွက်တကယ့်ပြproblemနာဖြစ်နိုင်သည်ကိုကျွန်ုပ်တို့သိပါသည်။ အချို့ဆေးဝါးပညာရှင်များသည်သူတို့၏စောင့်ကြည့်ရေးစနစ်နှင့် ပတ်သက်၍ သတိပညာရှိစွာနေထိုင်လိုကြောင်းကိုလည်းကျွန်ုပ်တို့သိပါသည်။ ဒါဆိုမင်းရဲ့ကောင်တာအောက်မှာမြင်တွေ့နိုင်အောင်စောင့်ကြည့်နေတဲ့ကင်မရာအားလုံးကိုတစ်ပြိုင်နက်တည်းမြင်ရအောင်ဘာကြောင့်ပြမလဲ။ ၎င်းသည်သင့်ဆေးဆိုင်တွင်အဘယ်အရာဖြစ်ပျက်နေသည်ကိုအမြဲကြည့်ရှုရန်ခွင့်ပြုလိမ့်မည်။
သင့်ဆေးဆိုင်အလယ်၌သို့မဟုတ်ကောင်တာအောက်ရှိဖန်သားပြင်၏အသုံးဝင်မှုကိုကျွန်ုပ်တို့တွေ့မြင်ခဲ့ရသော်လည်းသင်၏ကောင်တာအထက်ရှိမျက်နှာပြင်နှင့် ပတ်သက်၍ ကော။
မကြာသေးမီကကမ္ဘာကြီးသည်၎င်းရင်ဆိုင်နေရသောကျန်းမာရေးအကျပ်အတည်းနှင့်အညီလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်အရောင်းဆိုင်များတွင်လူများစုပြုံနေခြင်းကိုရှောင်ရှားရန်အတွက်ဆေးဆိုင်သို့မဟုတ်အခြားစတိုးဆိုင်များ၏ ၀ င်ပေါက်တွင် "လက်မှတ်" စနစ်များကို ပို၍ တွေ့ရသည်။ ယခု မှစ၍ စတိုးဆိုင်ထဲ ၀ င်သောအခါသင်လက်မှတ်တစ်စောင်ယူပြီး၊ သင်၏ပစ္စည်းကိုရှာဖွေသည်။ ၀ ယ်ယူသူအသစ်တိုင်းကိုဆေးဝါးဆိုင်ခွဲမှခေါ်ရမယ်ဆိုပါစို့။ ဝယ်သူများ၏လက်မှတ်အရေအတွက်ကိုပြသရန်သင့်ကောင်တာပေါ်တွင်မျက်နှာပြင်ကိုမထားပါနှင့်။
သင်၏ဆေးဆိုင်တွင်သင်၏ဒစ်ဂျစ်တယ်ဆိုင်းအင်စနစ်ကိုစီစဉ်ရန်ကူညီနိုင်သည့်အကြံဥာဏ်အချို့ရှိသည်။ သို့သော်ဖြစ်နိုင်ချေများမှာအကန့်အသတ်မရှိသောကြောင့်သင်၏ display ကိုသင်၏လိုအပ်ချက်များနှင့်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်ပြုလုပ်နိုင်သည်။ သင်၏ဖောက်သည်များအတွက်လက်တွေ့ကျသည့်အပြင်ဒီဂျစ်တယ်ဆိုင်းဘုတ်သည်လည်းသင့်အတွက်အသုံးဝင်ပြီးသင်၏ဘဝကိုပိုမိုလွယ်ကူစေလိမ့်မည်။
CVS ကျန်းမာရေးအမြတ်သည်မူးယစ်ဆေးသိုလှောင်ရောင်းအား ၁၁% နီးပါးတက်သည်
LCD ဒီဂျစ်တယ်ဆိုင်းဘုတ်များစျေးကွက် - ရှေ့တွင်ခိုင်မာသောအရောင်းအ ၀ ယ် | LG Electronics, Philips, Toshiba